मांसाहारीमा यस्तो रोगको जोखिम ! - समय-समाचार
मांसाहारीमा यस्तो रोगको जोखिम !
समय-समाचार बिहीबार, २०७८ असार १० गते, १४:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसहरु आफ्नो सस्थ्यका लागी निकै सचेत हुन थालेका छन् तर उनिहरुलाई मन पर्ने र स्वादिष्ट परिकारलाई भने छोड्न गाह्रै परीरहेको हुन्छ ।
त्यस्तै धेरै मानिसका लागी स्वादिष्ट लाग्ने चिज हो मांस अर्थात मासु । यसको परिकाले धेरैलाई तान्छ । मासुको नाम सुन्नेबित्तिकै धेरैको –याल चुहिन्छ तर स्वादिष्ट भएपनि यसको अधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि भने हानिकारक पनि छ ।
सु खाने धेरैजसो मानिसहरू चिढिइरहन्छन् र जतिखेर पनि रिसाइरहन्छन् । यिनीहरूको स्वभाव पनि उग्र हुन्छ । मासु खाँदा तपाईंको शरीर र मन दुवै अस्वस्थ रहन्छ ।
मांसाहारीहरू शाकाहारीका तुलनामा गम्भीर रोगको बढी शिकार हुन्छन् । यी रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर, मृगौला बिग्रने, बाथ र अल्सर पर्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार, मांसाहारले धूम्रपानजत्तिकै हानि गर्छ । मासु खानेलाई क्यान्सरको खतरा बढी हुन्छ ।
शाकाहारी स्वस्थ, दीर्घायु, निरोगी र तन्दुरस्त हुन्छ ।
बर्ड फ्लु र स्वाइन फ्लु जस्ता रोग मासु खानेलाई नै लाग्छ । संसारको एक चौथाइ प्रदूषणको कारण मासु नै हो । मानिसहरूले मासु खान छोड्ने हो भने ७० प्रतिशतसम्म प्रदूषण कम हुन्छ । मासुका लागि हुर्काइने जनावरले अत्यधिक पानी र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरिदिन्छन् ।
मासु खाने मानिसको उमेर पनि छोटो हुन्छ ।
मासु महंगो पनि छ । यसमा पैसा खर्च गर्नुको साटो अरू कुनै असल काममा लगाउनुस् । मांसाहारीहरू शाकाहारीका तुलनामा डिप्रेसनको शिकार बढी हुन्छन् । सु पचाउन धेरै समय लाग्छ । मान्छेको आन्द्रा हिंस्रक जनावरको जस्तो ठूलो हुँदैन त्यसैले मासु पचाउन मुश्किल पर्छ ।
हिन्दू धर्मशास्त्रले पनि मासु नखानू भन्छ ।
गीताका अनुसार, मांसाहार राक्षसी गुण भएका मानिसले खान्छन् । मासु र रक्सी तामसिक भोजन हुन् । यस्ता मानिस पानी, कुकर्मी, दुःखी, अल्छी र रोगी हुन्छन् । महाभारतमा मासु नखाने मानिसले १०० यज्ञ गरेबराबरको पुण्य पाउने उल्लेख गरिएको छ ।